Soo-saareyaasha Raashinka Trenbolone Enanthate & Alaab-qeybiyeyaasha - Warshadda
Trenbolone E (Trenbolone enanthate) waa mid ka mid ah steroids oo lagu kala saari karo sida xoogga ah ee dheellitiran ee ku darsaday muruqyada. Baahida ay ka leedahay jir-dhiseyaasha ayaa kor u kacay sanado badan sababtoo ah wax-ku-oolnimada koritaanka muruqyada. Eren E (Trenbolone enanthate) waa qaabka ugu dheer ee loo yaqaan "trenbolone" oo leh heer nuugid ah oo dheellitiran. Waxay leedahay nus ah laba iyo toban maalmood oo ka qaybqaata ficilka anabolic ee dheeraadka ah.
Raw Trenbolone Enhanthate budada (10161-35-8) video
Raw Trenbolone Enanthate budada (10161-35-8) Sharaxa
Raw Trenbolone budada loo yaqaan 'eninthate Enanthate', oo loo yaqaan 'nickname Trenabol', ayaa ah unugyo loo yaqaan 'anabolic-androgenic steroid' (AAS) iyo nooc ka mid ah nandrolone oo aan weligiis suuqeyn. Waa C17β enanthate ester iyo hormarin dheer oo hormoon ah ee trenbolone. Raw Trenbolone Enanthate budada marna laguma ansixin isticmaalka caafimaadka ama caafimaadka xoolaha laakiin waxaa loo isticmaalaa cilmi-baaris cilmi-baariseed waxaana lagu iibiyey suuq madow oo internetka ah sida nadiifiyaha naqshadeeye jirka iyo cayaaraha.
Ciyaartoyda iyo jir-dhiseyaashu waxay isticmaalayeen budada Raw Trenbolone Enanthate iyagoo isticmaala daroogada jirka iyo daroogada waxqabadka leh muddo tobanaan sano ah. Waxaa jira tiro badan oo faa'iidooyin ah sida jimicsiga iyada oo loo marayo isticmaalka budada Raw Trenbolone Enanthate sida AAS, sababtoo ah waxaa lagu qiyaasay inuu yahay qiyaastii shan jeer ka waxtar badan oo ka xoog badan testosterone. Si ka duwan testosterone, budada Trenbolone Enanthate ma keento wax dareemid dheecaan ah inta ay helayaan tiro muruq ah. Tani waxay u oggolaanaysaa in jidh-dhisayaashu ay u muuqdaan kuwo ciriiri ah, taasina waa sababta ay u badan tahay in la isticmaalo marka la diyaarinayo dhacdooyin tartan.
Raw Trenbolone Enanthate budada (10161-35-8) Smamnuucista
Product Name Raw Trenbolone budada ugu fiican
Magaca Kiimikada Trenbolone Enanthate; UNII-FF02TM6THR; FF02TM6THR; 1629618-98-9; Xaqiijinta Trenbolone; SCHEMBL634216
Molecular Wsideed 382.544
barafku Psaliid 72-78 ℃
Application Raw Trenbolone budada loo yaqaan "Enanthate Enantea" waa mid ka mid ah steroids ugu awoodda badan oo leh awood waxqabad weyn oo gaar ah si gaar ah loogu talagalay cayaaraha iyo dhismayaasha jirka. Trenbolone Enanthate budada ayaa ka fiican tan testosterone haddii si haboon loo isticmaalo iyo sida ku cad talooyinka.
Waa maxay Root Trenbolone Enanthate budada (10161-35-8)?
Trenbolone Enanthate budada waa farsamooyin anabolic antrolic androgenic, oo leh 500 marar badan anabolic iyo steroid styroid ka badan testosterone. Xeryaha Trenbolone waxaa ku jira hormoonka Trenbolone oo ku xiran aaladda (Enanthate), kaas oo gacan ka geysanaya xakamaynta dhaqdhaqaaqa hoormoonka. Daawada Trenbolone Enathate waxaa ugu muhiimsan isticmaalka ujeeddooyinka jirka, oo ay ku jiraan jarida iyo guntinta. Caafimaad ahaan, waxaa dhif ah in loo isticmaalo hypogonadism, hypogonadotropic hypogonadism, iyo dib u dhigista qaangaadhka ragga, halka dumarka, waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo kansarka naasaha ee qafiifka ah. Trenbolone Enanthate budada ayaa sidoo kale loo isticmaalaa daawo xoolaad ah xoolaha si loo kordhiyo koritaanka muruqa iyo rabitaanka cuntada.
Sida Raw Trenbolone Enanthate budada (10161-35-8) shuqullada
Sababtoo ah budada Trenbolone Enanthate waxay muujinaysaa nus-nus ah 7 - 10 iyo hadda waxay ka badan tahay inta udhaxeysa lidkeeda kale ee dhererka dheer ee Parabolan, waxay bixisaa dad badan oo isticmaala inta badan cirbad-yar-yar ama ay u helaan cirbado badan oo aan ku haboonayn qaab Trenbolone si loo isticmaalo. Marka la barbardhigo budada Trenbolone Acetate, taas oo u baahan maalin kasta oo cirbado ah oo aad u yaryar, Trenbolone Enanthate budada waxay u baahan tahay maamulka laba jeer toddobaadkii oo leh cirbad kasta oo si siman u faafa (Isniinta iyo Khamiista, tusaale ahaan). Sababtoo ah Trenbolone waxaa loo tixgeliyaa steroid heer dhexdhexaad ah oo heer dhexdhexaad ah, inta badan dadka isticmaala ee xaruntan ayaa si caadi ah uga warqabta caanaha iyo ka soo baxa. Qaar badan oo dhexdhexaadin ah oo tallaabadooda ugu horeeya u qaadaya Trenbolone waxay door bidaan budada Trenbolone Enanthate sababtoo ah fududaynta irbadaha yar-yar. Si kastaba ha ahaatee, faa'iido la'aanta tani waa xaqiiqda ah in Trenbolone uu yahay stabto anabolic oo ah mid aad u xoog badan oo leh waxyeelo ka iman karta daawooyinka aan la arki karin. Sidaa darteed waxaa loo yaqaan 'steroid' qalooc ah, iyo kuwa bilawga ah ee Trenbolone kuwaas oo la yaabi kara foomka loo isticmaali karo waxay doonayaan in ay doortaan Trenbolone Acetate halkii. Sababta oo ah in si dhakhso ah nolosha Nolosha Trenbolone Acetate waxay hubisaa in heerarka dhiigga ee Trenbolone uu si dhakhso ah u kaco iyo si dhakhso ah u dhaco, si loo hubiyo in si dhakhso ah looga nadiifiyo jirka waa in wax kasta oo soo ifbaxaya oo uu isticmaaluhu rabo inuu joojiyo. Iyadoo Trenbolone Enanthate budada, laba asbuuc waa waxa loo baahan yahay ka hor Trenbolone si buuxda u nadiif ah jirka, inta lagu jiro xilligaas oo saameyn ku yeelan kara saameynaha waxyeellada.
Sidaa daraadeed waa shakhsiyaadka u adeegsanaya macluumaadkaan iyo in ay naftooda go'aansadaan in eey ku haboontahay in duritaanku sii yaraato runtii u qalantaa in la sugo laba toddobaad ka hor intaysan daroogadu ka muuqan jidhka haddii wax saameyn ah aan laga helin. Haddii isticmaaluhu uu yahay isticmaale khibrad leh oo ka mid ah Trenbolone oo hore u fahamsan falceliska jidhkooda, go'aankan waa in horay loo sameeyaa.
Raw Trenbolone Enanthate budada (10161-35-8) Qiyaasta
Cudurka Trenbolone waxaa caadi ahaan loo isticmaalaa saliid lagu muday. Qiyaasta ugu badan ee kooxdu waa 75 oo ah 100 mg. Ordinary U qaado laba jeer toddobaadkii. Mudada saxda ah ee isticmaalka caadi ahaan waa toddobaadyo XNUM.
Raw Trenbolone Enanthate budada (10161-35-8) Faa'iidooyinka
Nitrogada lagu keydiyo muruqyada waxay sii haynaysaa anabolism socsocod ah iyo istaatistikada dhererka dhererka. Inta badan waxaad ku keydsan kartaa tikidhada iyo tan tani waa mid saameyn ku leh budada enenthate trenbolone - waxay xajisaa nitrogen si ay u sii joogaan muruqyada.
Boosaska Sulfit Protein
Trenbolone enanthate budada waxay ku dhuftaa bareeyaha gaaska waxayna ujirisaa dheecaanka borotiinka ee xawaaraha waraabka. Ma aha oo keliya in uu ku dhiirrigeliyo koritaanka murqaha, laakiin waxa uu ilaaliyaa sidoo kale fure u ah goynta iyo dhajinta tababarka.
Inkasta oo tani ay tahay mid saameyneysa trenbolone enanthate budo ma muujinayso weli waa mudan yahay hadal. Ma jiraan wax saameyn ah estrogenic taasoo micnaheedu yahay in eber ay ku dhisaan biyaha jirka iyo guulaha dhabta ah.
Waxay hagaajisaa dulqaad
Unugyada dhiigga ee cas (red blood cells) ayaa ah kuwa gaadiidka loogu talagalay oksijiinka ku wareegsan jirka. Waxay tagaysaa iyada oo aan ku dhihin, heerka sare ee unugyada ayaa tiriya oksijiin badan oo aad ku boodi doonto jirkaaga.
Waxay kordhisaa Awoodda iyo Awoodda
Mid ka mid ah saameynaha ugu muhiimsan ee trenbolone budo budo ah ayaa xaq u leh inuu ku faani karo waa awoodda aad ku adkeyn karto kuna siinayso awoodda muhiimka ah - dhakhso!
Halkan waxa ku yaala guudmar ku saabsan saameynta wanaagsan ee qof kasta oo ka mid ah jirka dhismaha ayaa ka soo bixi kara budada "Trenbolone" enanthate:
Muruqyada adag iyo kuwa murugeysan
Waqtiyada soo kabashada ayaa yaraaday
Dheecaan firfircoon leh
Yareynta boqolkiiba dufanka jidhka
Waxay u fiican tahay wareegyada wareega
Soo iibso Trenbolone Enanthatebudada laga bilaabo Buyaas.com